PÉTANQUE. Nandravarava tany ampita indray ny ekipa malagasy • Madagossip
PÉTANQUE. Nandravarava tany ampita indray ny ekipa malagasy
il y a 2 années 4.7 K
Teo amin’ny ampahavalondàlana (8ème de finale) dia efa namiratra isika malagasy. Raha ny Pétanque na tsipy kanetibe no resahina, dia iray amin’ireo hetsika 3 vaventy indrindra any France ny Europétanque des Alpes-Maritimes. Andiany faha-16 ity notontosaina ity ny 22, 23, 24 jolay 2017, tao Nice.
Ekipa malagasy 5 no tavela teo amin’ny 8ème de finale. Nisongadina hatrany ireo mpilalao malagasy : 100% Malagasy ireo niady ny lalao famaranana.
Nandrobaka ny finale ary i Falimanantsoa, Andrianjanka ary Andrianirainy. Ekipa sambany vao nandray anjara tamin’ity tournoi ity.
Bravo Madagascar !
PS: Marihina fa voatery nofoanana ity hetsika ity tamin’ny herintaona, ny antony dia ny fisian’ilay asa fampihorohoroana tao Nice ny 14 jolay 2016 (izay nahafatesana vehivavy malagasy iray). Ho mari-pahatsiarovana ireo namoy ny ainy dia nampanidina voromailala 86 ho mariky ny fandriampahalemana sy ny fahafahana ny mpikarakara.
Tagseuropétanque finale madagascar pétanque